Galaxy S7 iyo LG G5 kuma rakibi karaan barnaamijyada MicroSD | Wararka Gadget
Paul Aparicio | | Android, Mobiles
Markii Samsung ay soo bandhigtay Galaxy S6 sanadkii la soo dhaafay, ma jirin wax dhaleeceyn ah oo loo helay in laga takhalusay laba ka mid ah qodobadii ugu xiisaha badnaa ee qaabkii hore: hantida siisay u adkeysiga biyaha iyo baabi'inta booska loogu talagalay kaarka SD. Taasi waa sababta sanadkan ay dib ugu noqdeen oo ay labada qodobba ku dareen Galaxy S7. Taleefanka kale ee casriga ah ee ugu xiisaha badan ee lagu soo bandhigay MWC ee magaalada Barcelona waa LG G5, oo labaduba waxay isticmaali karaan a kaarka microSD si loo ballaariyo xusuusta qalabka, laakiin leh nuances.
Noocyadii hore ee Android, kaarka SD waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya in lagu keydiyo xogta, laakiin marka la gaaro Android 6.0 Marshmallow xusuusta oo dhan waxaa loo isticmaali karaa inay tahay block, sidaa darteed nidaamku ma kala soocayo xusuusta taleefanka iyo xusuusta kaarka SD. Xaqiiqdii, ma jirto wado lagu kala saaro waxaana loo isticmaali karaa in lagu rakibo codsiyada. Laakiin warkan wanaagsan wuxuu umuuqdaa inuusan kajirin Galaxy S7, Galaxy S7 Edge iyo LG G5.
1 Galaxy S7, Galaxy S7 Edge iyo LG G5 waxay isticmaalaan nidaamkii hore ee faylka
2 Ujeedada labada shirkadood waa in laga fogaado jahwareerka
Galaxy S7, Galaxy S7 Edge iyo LG G5 waxay isticmaalaan nidaamkii hore ee faylka
Samsung iyo LG waxay go'aansadeen inay sii hayaan nidaamka faylka hore, taas oo macnaheedu yahay codsiyada lama rakibi karo kaarka MicroSD. Dabcan, sida had iyo jeer, waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo muusikada, fiidiyowyada, sawirrada iyo noocyada kale ee dukumiintiyada. Dhibaatadu waxay kaliya saameysaa codsiyada waxayna noqon kartaa mid ka sii yar ama ka sii daran iyadoo ku xiran isticmaalka uu adeegsado isticmaalaha boosteejada: haddii codsiyada culus la rakibo, sida cayaaraha tayada leh, kaarka MicroSD ma shaqeyn doono oo xusuusta waa in la adeegsadaa. telefoonka.
Sababta Samsung u adeegsanaysa nidaamkii hore ayaa ah nidaam cusub ayaa wareersan. In Android 6.0 Marshmallow, kaarka MicroSD waa in laga qaabeyaa qalabka si loo isticmaali karo. Iyada oo qayb ka ah nidaamka iyo in la kordhiyo amniga, xogta ayaa la xareeyay. Tani waa inay noqotaa wax wanaagsan, laakiin dhinaca kale ayaa ah in kaarka aan si xor ah looga saari karin, maadaama aan loo isticmaali karin qalab kale oo mobiil ah ama kumbuyuutar ah Waxay ku shaqeyn doontaa oo keliya aaladda loo qaabeeyay, markaa wax ma tarto marka la baxo. LG wax faallooyin ah kama bixin, laakiin sababihiisu waxay la mid yihiin kuwa Samsung.
Ujeedada labada shirkadood waa in laga fogaado jahwareerka
Isticmaalayaasha isticmaalay kaararka noocan ah ayaa sidoo kale loo bartay inay ka saaraan qalabka ku isticmaal kombiyuutar kale, sidaa darteed wax waliba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Samsung iyo LG labaduba ay doonayeen inay sii wadaan isbedelkan waxayna go aansadeen inay meel iska dhigaan shaqada cusub ee Android si ay usii wadaan adeegsiga nidaamkii hore.
Adeegsiga nidaamkii hore xaqiiqdii waxay noqon doontaa mid jahwareer yar, laakiin waxay dhibaato ku noqon kartaa dadka isticmaala qaarkood. Labada Galaxy S7, Galaxy S7 Edge iyo LG G5 labaduba waxay la yimaadaan a 32GB xasuusta gudaha (ugu yaraan suuqyada badankood). Saldhigyada Samsung waxay aqbalaan kaararka ilaa 200GB, halka LG G5 uu aqbalo kaararka ilaa 2TB. Ma dhihi karno waa wax yar, laakiin dhammaan kaydintaas waa la khasaaray haddii waxa aan dooneyno ay tahay in la rakibo barnaamijyo badan iyo / ama aad u culus.
Intaa waxaa dheer, waxaa la rumeysan yahay in, iyadoo laga jarayo booska uu nidaamka adeegsanayo, laga bilaabo 32GB ee isticmaalayaasha keydinta kaliya 23GB ayaa la heli karaa. Caqli ahaan, tani waxay ka badnaan doontaa ku filan isticmaaleyaal badan (Waan ogahay kiisaska ay ku filan yihiin oo keliya 4GB ama 5GB), laakiin "gamers"-ku waa inay intaas oo dhan ku xisaabtamaan. Qaar badan oo ka mid ah ciyaaraha leh sheekooyinka iyo sawirada ugu fiican waxay leeyihiin culeys u dhexeeya 1GB iyo 2GB iyadoo la rakibo in yarna waan waayi karnaa boos aan ku rakibno codsiyo badan. Noqo sida ay noqon karto, xaalada ugu xun waxaad had iyo jeer ka takhalusi kartaa ciyaaro aan loo isticmaali doonin waqti cayiman.
Go'aanka Samsung iyo LG miyuu kharibayaa qorshooyinkaaga inaad ku iibsato mid ka mid ah calankoodii ugu dambeeyay?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Galaxy S7 / Edge iyo LG G5 kuma rakibi karaan codsiyada kaarka MicroSD
Si fiican ayey u go’aansadeen Samsung iyo LG. Si aad ugu guurto codsiyada culus sd waxaa jira codsiyo aad loo jecel yahay oo aad u tiro badan muddo dheer. Kiiskeyga waxaan u isticmaalaa link2sd. Ficil ahaan xaddiga wan ee qalabka ayaan dan ka lahayn aniga oo ku mahadsan codsigan.
Jawaab Marco Argandoña
Waxay ila muuqataa inay aniga ila wanaagsan tahay dhanka 2da, maadaama dhibaato kale oo aan la sharraxin ay tahay iyadoo kuxiran fasalka kaarka sd-ga inuu noqon doono mid dhaqso badan ama gaabis ah marka la aqrinayo lana qorayo macluumaadka. Dadka badankood waxay dhigaan kaararka xusuusta ee fasalka 3 (kan ugu raqiisan) taas oo ka dhalanaysa in moobilku qaato waqti dheer si uu u furo ciyaar ama codsi lagu rakibay kaarka. Sidan ayaa lagu hubiyaa in mobiilku dhaqso u socdo.
15 Ku guuleystayaasha Oscar ee ugu horreeyay xaaladdooda